Iyya’a Dargaggoo Oromiyaaf – Gubirmans Publishing
Posted on April 29, 2013 by bgutema
Kurnan afur darban keessa lubbuu hedduutu galafatame, qaama hedduutu naafate, qeyee hedduutu faca’ee, maatii hedduutu guraarame, qabeenya hedduutu barbadaawe. Wareegama dargaggoon sun baasanii fi miidhama ummata Oromoo irra gaheen jija gurguddaatu galmeeffame. Kan lubbuun hafan keessa mamiin kaayyoo utuu hin facaane caalaatu galmeeffama ture. Xiinxala sanaa seenaaf dhiisuu dha. Gaaffii belbelaan dargaggoo si’anaa fuldura jiru, amma maal yoo goone kaayyoo dhiigi sun hundi itt lola’e fiixaan baafna kan jedhu. Deebin saa jaaramaa cimfachuu, waan qabaniitt dudhama (commitment) qabaachuu dha. Sun dhaaba sabaa angaafichi akka jabaatu utubaa sibilaa ta’uufii danda’a. Dargaggoon yerosii kan akka tasaa wareegama irra hafan amma dulloomaa jiru. Rakkinni isaan bobbaase ammayyuu hin furamne. Caalaattuu, sabichi tuffatamaa, amanteef jeeqamaa, biyyattiin dureeyyii alaatt gurguramaa, ummati araddaa hiddi hannuura saa itt awwaalamee kan dur caalaa buqa’aa jira. Kana caalaa maaltu didhaa nama irra kaa’uu danda’aa? Didhaa sana baasuuf ciminaan ijaaramuu, ijaaramuu, ijaaramuu dha!!
Oromiyaa irra fagaatanii kan jiraatan laalaan saa hanga kanneen gubataa jiranii itt hin dhagahamu taha. Nammi biyyaa guyyuu ildiimamaa, doorsifamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, ari’amaa, yoom natti dhufu jedhee birdhuun goolamaa jiraata. Kun haala galtuu fi gantuunillee jalaaa miliquu hin dandeenye. Ala jiraachuun yoo hardha itt hin dhagahamne oolee bulee ijoolleen saanii jeequmsa eenyummaa jalaa bahuu hin dandahanii. Kanaaf waan danda’aniin dirmatanii qabsoo saba saanii jajjabeessuun duubbee ittiin boonan uumuufii danda’a. Qabsoon wal danda’isaa fi obsa gaafata. Dantaa ofiif durfannoo yoo kennine eessaanu hin ga’u. Ofirrumaa, of jaja fi of tuuluun farra qabsoo fi jireenya hawaasomaati. Miira basaasa diinaan jajjabeeffamusii.
The Closing chapter of Colonialism in the Horn of Africa